Tilda: inogadziriswa inodonhedza-pasi terminal yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Munharaunda dze * nix, unoshanda zvakanyanya kubva kuchiteshi, saka chero chishandiso chinogona kukubatsira mukutungamira kwezuva nezuva kana kukubatsira iwe kuve neruzivo rwakanaka netambo yekuraira inogamuchirwa. Panguva ino ini ndichakuratidza Tilda, inogadziriswa kwazvo terminal emulator chirongwa chaungangodaro usina kuziva nezvacho.
Iyo inonyanya kuzivikanwa hunyanzvi hwaTilda ndeyekuti haizvibate seyakajairika windows hwindo, asi asi inogona kukwidziridzwa uye kudzikiswa kubva pamusoro pekona, ine hotkey. Nenzira iyoyo, unogona kuve nazvo zvakanyanya paruoko paunenge uchizvida.
Pamusoro peichi chimiro chekuwana nyore uye kwakananga, uye iyo yakakwira yekumisikidza kugona kugadzirisa zvinoenderana nezvido zvako, zvinomirawo kune mamwe masimba, senge rutsigiro rwayo rwekupedzisira matabhu, kujekesa, marongero echitarisiko anowanikwa kugadzira nzvimbo yebasa seinofadza sezvinobvira, mhando yekutsikisa, hotkeys inogadzirirwa kuwanda kwemabasa, uye dzimwe sarudzo dzinokanganisa maitiro aTilda.
Naizvozvo, kana iwe watoedza mamwe emulators emagetsi akadai xterm, Konsole, GNOME Terminal, nezvimwe, uye anga asina kugutsa, unogona kuyedza rombo rako neiyi emulator ine simba. Zvakare, Tilda inopa kugadzirwa kwepamusoro chaiko izvo zvinokubatsira kuyanana neCLI kana wanga uchizvitiza.
Kana iwe ukawedzera kureruka kwayo kune zvese izvo, iwe une chimwe chikonzero chekutanga kuchishandisa. Uye ndeyekuti Tilda ane kuderedzwa kwekushandisa zviwanikwa, Zvichiita kuti ive yakanaka kumakomputa ekare kana akaderera. Kunyangwe iine akati wandei tabo akavhurwa, mashandisiro ayo haazosvika zvinopfuura mashoma mashoma makumi MB yeiyo huru memory ...
Kukwanisa ku instalar muUbuntu, mu yedu blog Iwe une zvese zvaunoda kuti uzive zvakatsanangurwa nhanho nhanho, kunyangwe iwe uchizviwana mune mamwe akawanda repos repamutemo uye mashopu ekushandisa kuitira kuti kumisikidza kuve nyore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Tilda: inogadziriswa inodonhedza-pasi terminal